> Resource> Naghachi> Olee naghachi Data si floppy Disk
Enwere m ike weghachite Data si floppy Disk?
Ebe a bụ nsogbu m: Taa mgbe m dị ihe na-emeghe m floppy disk na-enweta ụfọdụ data site na ya, m nwetara a ozi gwara m na disk dị mkpa ka e Ị. M gbalịrị a floppy disk na ụfọdụ ndị ọzọ kọmputa. The pụta bụ otu ihe ahụ. Ma m nwere ike usoro ya ugbu a. M mkpa iji nweta ihe m data na na floppy disk azụ. Nwere ike onye na-enyere m biko?
Ọ bụ ezie na floppy disk bụ otu agadi nchekwa na ngwaọrụ na obere ebe nchekwa, ọ ka na-eji site na ụfọdụ ndị ọrụ n'oge. The floppy data ọnwụ nke bụkwa a na-enwekarị nsogbu na floppy disk onye ọrụ nwere ike na-ezute. Ya mere, ihe bụ gị echiche naghachi data si floppy disk mgbe data furu efu?
Ihe ngwọta kasị mma n'ihi na ị na weghachite data si floppy disk bụ ghara usoro ya na anya n'ihi na a floppy disk data mgbake omume na Internet inyere gị aka. Ebe a bụ ihe ga-amasị m ka nwere ike ikwu n'ihi unu: Wondershare Data Recovery, ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac. Nke a bụ gị mma nhọrọ naghachi furu efu, ehichapụ, ma ọ bụ ọbụna formatted faịlụ site na gị floppy disk. Ị nwere ike ugbu weghachite fọrọ nke nta niile dị iche iche nke data furu efu si a floppy disk, gụnyere oyiyi na akwụkwọ faịlụ.
Download a ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery n'okpuru ịrụ floppy disk data mgbake ole na ole clicks ugbu a!
Naghachi Data si floppy Disk na 3 Nzọụkwụ
Naghachi furu efu data gị floppy disk, i kwesịrị ime ka n'aka na gị floppy disk nwere ike-etinyere gị na kọmputa na ghọtara dị ka a nchekwa media.
Ugbu a, ka hazie naghachi na Windows version nke Wondershare Data Recovery.
Nzọụkwụ 1 Họrọ a mgbake mode
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery na kọmputa gị, ị pụrụ ịhụ a mmalite window dị ka oyiyi n'okpuru.
Ebe a na-agbake furu efu data si floppy disk, ka họrọ "Echefuola File Iweghachite" dị ka a mbụ na-agbalị.
Nzọụkwụ 2 iṅomi gị floppy disk furu efu data
Mgbe ahụ usoro ihe omume window ga chọpụta na-egosi niile partitions na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa iji họrọ mbanye akwụkwọ ozi maka gị floppy disk na pịa "Malite" button na-amalite ịgụ isiokwu.
Cheta na: Ọ bụrụ na data furu efu n'ihi floppy disk formatting, biko họrọ "Kwado Deep iṅomi" nhọrọ ke window.
Nzọụkwụ 3 Naghachi faịlụ site na floppy disk
Mgbe scanning, niile hụrụ ọdịnaya na gị floppy disk ga-egosipụta na omume window. Ị nwere ike ele faịlụ aha ma ọ bụ preview hụrụ oyiyi elele ma gị furu efu data nwere ike natara ma ọ bụ.
Mgbe ahụ, ị ​​na mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Olee otú Naghachi Data si mbughari Media
Olee otú Naghachi Data mgbe Draịvụ Crash
Olee otú Naghachi Data si Uninitialized Disk
Top 5 softwares maka Linux data mgbake
Olee otú Naghachi ehichapụ ozi na Sony Xperia Z
EMTEC Data Recovery: Olee naghachi Data si EMTEC nchekwa na ngwaọrụ
Olee otú Igosi Seagate Mmụba Data Recovery